धुवाँधूलोका कारण स्वास्थ्यमा हुने समस्याहरूबाट बच्ने आयुर्वेदिक उपाय जान्नुहोस् – SN-One of the news portal in Nepal
धुवाँधूलोका कारण स्वास्थ्यमा हुने समस्याहरूबाट बच्ने आयुर्वेदिक उपाय जान्नुहोस्
२०७६ बैशाख ८, आईतवार १६:४२ मा प्रकासित
बढ्दो प्रदुषण नरोकिए धुवाँधूलोकै कारण आगामी दिन मानिसको स्वास्थ्य स्थितीमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । चेतावनीका कारण मानिसमा आफ्नो र आफन्तको स्वास्थ्य बारे चिन्ता बढेको छ । बढ्दो जनसंख्या र तिव्र रुपमा भइरहेका विकास निर्माणका गतिविधिले विश्वभर प्रदूषणको मात्रा बढ्दो छ | तर, यि खतरनाक समस्याबाट राहत पाउन आयुर्वेद विशेषज्ञहरूले केहि सुझाब र उपाय बताएका छन् । यि सुझाबको व्यवहारिक प्रयोगबाट तपाईं हामी सजिलै धुवाँ धूलोका कारण हुने स्वास्थ्य समस्याबाट टाढै रहन सक्छौं ।
डा. कर्णले प्रत्येक घरमा तुलसी रोपेर पनि धुवाँधूलो नियन्त्रण गर्न सकिने बताएका छन् । यसबाहेक दैनिक १०–१५ मिलिलिटर तुलसी पत्ताको रस पिउन सके त्यसले श्वासप्रश्वास प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ ।आधा चम्चा बेसारको धुलोमा एक चम्चा घ्यू वा मह मिसाएर बिहान बेलुका खाली पेटमा खादा पनि शरीर स्वस्थ हुने डा. कर्णको सुझाब छ । यसले शरीरमा भएका प्रदूषणलाई सफा गर्नमा सहयोग गर्छ ।
प्रदूषणले फोक्सोमा कति प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा वरीपरीको हावामा कति रासायनिक पदार्थ मिसिएको छ भन्नेमा निर्भर गर्छ । श्वासप्रश्वासका बिरामीलाई त प्रदूषणसबैभन्दा बढी खतरनाक हुन्छ । लामो समयसम्म प्रदूषणयुक्त वातावरण, जस्तै सडक तथा उद्योग वरपर बस्नेलाई फोक्सोको समस्या हुने डर हुन्छ ।लामो समयसम्म प्रदूषणमा रहनेहरुलाई फोक्सोको संक्रमण, क्यान्सरजस्ता श्वासप्रश्वाससम्बन्धी कयौं खालका रोग लाग्ने खतरा हुन्छ । गाडीबाट निस्कने धुँवाबाट दम पनि हुनसक्छ । प्रदूषणको सम्पर्कबाट ब्रोङकाइटिस, एम्फीसीमा र दम रोगीहरुको स्थिति झन् बिग्रन सक्छ ।
घरमा हुने वायु प्रदूषण पनि खतरनाक हुन्छ । एक अध्ययनअनुसार खाना पकाउने, चिसो मौसममा कोठा तातो राख्न प्रयोग हुने इन्धन फोक्सोका लागि बढी खतरनाक हुन्छ । यसबाट फोक्सोको प्रतिरक्षण क्षमता कमजोर हुन्छ ।धूमपानबाट पनि फोक्सोलाई सबैभन्दा बढी हानी पुग्छ । बढी धूमपान गर्नेलाई फोक्सोको क्यान्सर र श्वासप्रश्वासजन्य समस्याको खतरा बढी हुन्छ । बढीजसो गर्मी महिनामा केही स्थानमा ओजोन र अन्य खालको प्रदूषक स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ ।
तपाईं उपचारको लागि कुनै चिकित्सककहाँ पुग्नु भयो भने उसले पहिला तपाईको कुरा सुन्दै नोट गर्छ । त्यसपछि परिक्षणको लागि मुख बाउन लगाउँछ र जिब्रो बाहिर निकाल्न भन्छ । अनि टर्च लाइट बालेर जिब्रोलाई राम्रोसँग नियाल्छ ।टाउको, पेट दुखेको होस् या शरिरमा अन्य समस्या नै किन नहोस । चिकित्सकले जिब्रोको अवस्था हेर्न छुटाउँदैन । तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि चिकित्सकले किन जिब्रोलाई यति धेरै महत्व दिन्छन् ?
जिब्रो पाँच ज्ञानेन्द्री यमध्येको एक हो । जिब्रोको काम शब्दको ऊच्चारणमा सहयोग गर्ने, बोल्ने र खानेकुराको स्वाद छुट्टयाऊने मात्र होइन । जिब्रोले स्वास्थ्य समस्याको बारेमा पनि संकेत दिने गर्छ ।जिब्रोको अवस्था हेरेर सजिलोसँग स्वास्थ्य समस्याबारे थाहा पाउन सकिन्छ । जिब्रोलाई पेटको दर्पणको रुपमा पनि लिइन्छ । यसले पाचनसम्बन्धी समस्यालाई प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै पाचन प्रणालीको गडबडी र अन्य खरावीलाई पनि देखाउने गर्छ ।
अपचले गर्दा पित्त बढेर टाउको दुख्नुका साथै आँखाको दृष्टि क्षमतामा पनि समस्या सृजना गर्छ । पेटमा भएको बायुविकारले मुटुको धड्कनलाई बढाउने, छातीमा दुखाई हुने गर्छ । यस्ता समस्याको संकेत जिब्रोमा सहजै देख्न सकिन्छ । त्यति मात्र नभएर जिब्रोले अंगहरुले गरिरहेको कामबारे पनि जानकारी दिन्छ ।अर्द्ध पक्षधात भएमा जिब्रोको अघिको भाग सुक्ने गर्छ । त्यस्तै, पहेँलो र चिल्लो जिब्रोले रगतसम्बन्धि बिकारलाई इंगित गर्छ ।
साथै तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई पनि देखाउन कृपया सेयर गर्नुहोला ।तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ ।